Ambodin’Isotry: nosoloina ireo “buse” simba ho fisorohana ny tondra-drano | NewsMada
Ambodin’Isotry: nosoloina ireo “buse” simba ho fisorohana ny tondra-drano
Nosoloina tanteraka ireo « buse » tao Ambodin’Isotry (aigle noir) izay mamarina ny rano maloto ao amin’ny « canal C3 » na ny « canal Andriambeloma». Noho ny fahanteran’ity fotodrafitrasa ity dia simba sy tsy afaka manao ny asany intsony ny “buse” ka izay no nahatonga ireo fokontany maro toa an’ Ambodin’Isotry, Antetezana Afovoany II ho dibo-drano rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra.
Haharitra 3 andro ny faharetan’ny asa ary ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) sy ny Samva no miaraka manao ny asa.
Araka ny nambaran’ny tompon’andaikitra avy eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra dia efa tsy nahavita ny asany efa an-taona maro ny lalan’ny rano maloto teo amin’io toerana io ka nampijaly ny mponina teny an-toerana.
Azo heverina, araka izany, ny tsy fisian’ny rano miakatra intsony eny amin’ny fokontany Ambodin’Isotry (tsena, cité) sy Antetezana Afovoany II ary ny manodidina rehefa vita ny fametrahana ity “buse” vaovao ity.
Mponina maro no hahazo tombony amin’izany. Manentana ny mponin’Antananarivo, araka izany, ny kaominina mba hanaja tsara ny fotodrafitrasa sy tsy hanarinary ny fakony any anaty lakandrano mba tsy hiverimberenan’ny tondra-drano eto an-dRenivohitra. Ankoatra ny eny amin’ny fokontany Ambodin’Isotry sy Antetezana Afovoany II dia efa miezaka ny manolo tsikelikely ireo “buse” izay efa simba ny kaominina.